Izimpahla Ezihamba Phambili Ezivela eChina Umkhiqizo Ophakelwayo Wentengo Ephakeme Yepolyester Polystyrene | Rayson
Rayson eRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko Izimpahla ezihamba phambili Ezivela eChina Umkhiqizo Ophakeme Wepolyester Polystyrene Umcamelo
Umkhiqizi weRayson Spring Mattress ulandela ngokuqinile uhlelo lwe-ISO9001 lomhlaba wonke lokuqinisekisa ikhwalithi ukuphatha nokulawula inqubo yokukhiqiza.
Silandela ngokuqinile izinqubo ezijwayelekile zokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ihlangabezana noma yeqa okulindelwe ngamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zokuthengisa ngemuva kwamakhasimende emhlabeni wonke. Selokhu yasungulwa, uRayson uhlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihehayo kumakhasimende ethu. Sisungule owethu uR & D isikhungo sokwakhiwa komkhiqizo nentuthuko yomkhiqizo. Kuze kube manje, uRayson udlulise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba jikelele. Yonke imikhiqizo kubandakanya umkhiqizo wethu omusha inikezwa nge-design entsha, ikhwalithi eqinisekisiwe, namanani entengo wokuncintisana.
Ngingawathola kanjani amasampula？ Ngemuva kokuthi uqinisekise ukunikezwa kwethu futhi usithumelele izindleko zesampula, sizoqeda isampula kungakapheli izinsuku eziyi-15 ~ 20. Ungacela inkampani evelele ukuthi ithathe isampula enkampanini yethu noma ungasithumela i-DHL, FedEx noma i-UPS iqoqe inombolo ye-akhawunti, singakuthumela isampula lelo nge-akhawunti yakho.Can ungangisiza ukuthi ngizenzele noma ngisebenzise logo kumkhiqizo? Singenza umatilasi ngokusho komklamo wakho noma sinikeze insizakalo ye-OEM nje udinga ukuthi usinikeze umkhiqizo wakho wobuciko noma i-logo photos.May ngivakashele imboni yakho? Yebo, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza saseGuangzhou Baiyun, kungathatha ihora elilodwa ngemoto, futhi singahlela imoto ukukuthatha.